Banyere Anyị - Jingwan Mgbochi Wall Ịchọ Mma Co., Ltd.
Production na Sales
Glass ákwà mgbochi mgbidi engineering, iko ụzọ na window engineering, aluminum mpempe akwụkwọ mma engineering na ígwè Ọdịdị engineering
Jingwan Mgbochi Wall Ịchọ Mma (Guangdong) Co., Ltd. emi odude ke Huizhou City, a gbara osimiri okirikiri obodo na Pearl River Delta nke Guangdong Province. Jingwan nwere ihe abụọ Foto-ekesịpde enyemaka, nke bụ Huizhou Youjing Hardware Co., Ltd. ike na 2011 na Xinyi Technology (Huizhou) Co., Ltd. ike 2015. The ụlọ ọrụ azụmahịa na-agụnye R & D, mmepụta na ahịa nke iko ákwà mgbochi mgbidi engineering, iko ụzọ na window engineering, aluminum mpempe akwụkwọ mma engineering na ígwè Ọdịdị engineering. Jingwan nwere elu-larịị R & D oru otu na management ìgwè na-eduga ụlọ ọrụ na-ịmụta n'ihu. Ya elu-technology na ike nchịkwa mmadụ ekwe nkwa àgwà uru, na ya mbara management usoro na-arụ ọrụ usoro-akwalite enterprise development.
The ụlọ ọrụ bụ ike nke na-amị na nhazi
60,000 ㎡square mita nke iko ákwà mgbochi mgbidi, 80,000 square mita nke aluminum alloy ụzọ na windo, 150,000 square mita nke aluminum Ibé akwụkwọ, 3,600 tọn ígwè bughi akụkụ 500 tọn igwe anaghị-ígwè na ngwaahịa a ogologo okwu.
Rube isi na iwu nke "ahịa mbụ, àgwà nkwa" ebe oruru nke Jingwan Mgbochi Wall Ịchọ Mma (Guangdong) Co., Ltd., ụlọ ọrụ a ibe ya bụrụ n'ihu maka a mma na prompter ahịa ọrụ. The ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ngụkọta nke ebe banyere 60,000 square mita, na-ewu engineering e kere atọ n'ụzọ. Adọ-m: nchara akụrụngwa omumuihe na aluminum mkpuchi ogbako dechara na September 2011, na malitere mmepụta; Adọ II: Na November 2013, ogbako omumuihe maka n'ichepụta aluminum alloy ákwà mgbochi mgbidi, ụzọ na windo e guzobere, na malitere mmepụta. Adọ-III: akpaka fluorocarbon mkpuchi akara e guzobere December 2015, na malitere mmepụta.
The ụlọ ọrụ mmepụta bụ na ike dị ISO9001 mba àgwà ụkpụrụ, na enwetawo àgwà nzere asambodo. The ụlọ ọrụ bụ a ruru eru ụlọ ọrụ na-enye onye-nkwụsị ọrụ, na isi azụmahịa na-agụnye iche iche nhazi na mmepụta nke aluminum profaịlụ, aluminum Ibé akwụkwọ, fluorocarbon mkpuchi, ígwè ngwaahịa na igwe anaghị-ígwè ngwaahịa. The ụlọ ọrụ bụ ike nke na-amị na nhazi 60,000 square mita nke iko ákwà mgbochi mgbidi, 80,000 square mita nke aluminum alloy ụzọ na windo, 150,000 square mita nke aluminum Ibé akwụkwọ, 3,600 tọn ígwè bughi akụkụ na 500 tọn igwe anaghị-ígwè na ngwaahịa a ogologo okwu. The ụlọ ọrụ agbaso mbụ atụmatụ, mgbe nile-erubere ya ọkachamara spirit nke àgwà mbụ, ọrụ mbụ na azụmahịa aha mbụ. Anyị na-ekwe nkwa na-aghọta ahịa 'ntụziaka, anapụta zuru okè na ngwaahịa, na ike magburu onwe oru ngo.
Nchara akụrụngwa omumuihe na aluminum mkpuchi omumuihe
The ogbako maka n'ichepụta aluminum alloy ákwà mgbochi mgbidi, ụzọ na windo e guzobere
Automatic fluorocarbon mkpuchi akara
The ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ngụkọta nke ebe banyere 60,000 square mita
ígwè akụrụngwa ogbe , Steel Pipe Hand Railing , Steel kọlụm , ígwè akụrụngwa shelving , Steel akwa , Steel etiti ,